Ukuqeqeshwa kwe-ITIL Certification
Ukuqeqeshwa KwamaKlasi Wokuncintisana
I-14000 + Professionals Certified
Isitifiketi se-GlobalWith 100% Isiqiniseko seSitifiketi
Qinisekisa futhi Wandise ulwazi lwakho lwe-ITIL
Yakha amakhono okuzakhela futhi ulungiselele ukuhlolwa kweziqinisekiso ze-ITIL nge-ITIL boot camp training training camp kusuka ku-Innovative Technology Solutions. Amakhamera ethu okubhukuda aklanyelwe ukukufaka emthonjeni oyidingayo ukuze ufunde kahle, ukuze ukwazi ukuqinisa ngempumelelo nokwandisa amakhono akho. Bala ongoti bethu abaphezulu be-ITIL ukuba bakhuphuke ngokushesha.
Kulezi zimakethe ezihlukumezayo, izimboni kudingeka zithole izindlela ezinhle zokuphathwa kwenqubo, ukuze kuqinisekiswe ukuthi zihlala phambili komncintiswano futhi zenze inzuzo. I-Library Technology Infrastructure Library (i-ITIL®) iyisethi esiyisisekelo semikhuba emihle yokuphathwa kwezinsiza ze-IT ezihambisana nokuvumelanisa nezinsizakalo ze-IT ngezidingo zebhizinisi. ITS ikulethela inkambo ku-ITIL® Foundation eyethula izakhi ezibalulekile, imiqondo kanye nesigamazwi esetshenziswe ku-ITIL® Service Lifecycle. Ngokuzivocavoca okuningi, ukuhlolwa okuhlekisayo kanye ne-courseware ephelele, uzobe ulungele ukuzama isitifiketi se-ITIL® Foundation futhi usebenzise izimiso ukuze uhlangabezane nezinselele zomhlaba wangempela. Qaphela ukuthi I-innovative Technology Solutions iyinhlangano yokuqeqesha evunyelwe (ATO) ye-PEOPLECERT kanye ne-Partner of Axelos eqinisekisiwe ye-ITIL® Trainings.
Uhlelo lwe-ITIL® Foundation oluqeqeshwe ku-intanethi luqeqesha abaqokelwe ukuxhumana ngokuphumelelayo ezinkampanini zabo kanye namakhasimende nokunciphisa isikhathi sokuphendula. I-innovative Technology Solutions inikeza amakilasi e-inthanethi kulokhu okuqhutshwa yi-faculty yabo eqeqeshwe kakhulu. Uhlelo lokufunda i-E luhlelekile kahle futhi lugcina phambili kubompangi bakho.
Lapho sekuqedile le workshop kanye nomzamo ophumelelayo wohlolo, abazobhapathizwa bazoba abaqeqeshiwe ku:
Qonda ngokuphelele imiqondo, imigomo kanye nesigamazwi se-ITIL®
Qonda i-ITIL®imikhuba emihle nendlela yokuyisebenzisa ngayo ukuze kulungiswe izinqubo zokuthuthukisa okuqhubekayo
Qondisisa izinto eziyisisekelo zokuphathwa kwezinsizakalo kanye ne-Lifecycle Service ukuthuthukisa izinqumo zebhizinisi nokwandisa ukulindela kwamakhasimende
Thola ukulungiselela okuphelele kwe-ITIL®Isitifiketi sesisekelo
Uhlu lwezifundo ze-ITIL zokuqinisekisa
1. ITIL isisekelo
2. ITIL Intermediate SS (Isevisi Yesevisi)
3. ITIL Intermediate SD (Isevisi Yomsebenzi)
4. I-ITIL phakathi kwe-ST (Ukuguqulwa Kwesevisi)
5. I-ITIL ephakathi kwe-SO (Isevisi yokuSebenza)
6. I-ITIL ephakathi kwe-CSI (Ukuthuthukiswa Komsebenzi Okuqhubekayo)
7. I-ITIL ePMediate PPO (Ukuhlela, Ukuvikelwa kanye nokwenza ngcono)
8. I-ITIL ephakathi kwe-OSA (Ukusekela Ukusebenza Nokuhlaziywa)
9. I-ITIL ephakathi kwe-RCV (ukukhululwa, ukulawula nokuqinisekiswa)
10. I-ITIL ephakathi kwe-SOA (Izinkonzo Zesevisi Nezivumelwano)
11. I-ITIL Ukuphatha Kuyo yonke i-Lifecycle
12. I-ITIL Practitioner
13. U-ITIL Abanikazi Bokuphatha Abaphathi (SMP)
Ungathola kanjani i-Certified ku-ITIL
Inhloso yalo Isiqinisekiso se-ITIL Foundation ku-IT Service Management ukuqinisekisa ukuthi lowo ozobhapathizwa uthole ulwazi lwegama le-ITIL, isakhiwo kanye nemigomo eyisisekelo futhi uye waqonda imigomo esemqoka yemikhuba ye-ITIL yokuphathwa kwezinsizakalo.
The I-ITIL v3 isitifiketi esiphakathi iyatholakala kunoma ngubani oye wadlulaUkuhlolwa kwesisekelo se-ITIL. It isakhiwo modular nge module ngamunye enikeza ukugxila okuhlukile IT IT Service Management. Ungathatha njengabambalwa noma abaningi abaphakathi.
Abahlinzeki abaningi be-IT manje bathola ukuphatha abasebenzi abaningi abahlinzeki kunabasebenzi babo. Ngempela, kubhekene nokuphakama okuqhubekayo kwezinhlelo zokuhlanganiswa kwezinsizakalo ukuthi i-informatics professional yekusasa kuyodingeka ibe nochwepheshe
Phatha ingozi yeBhizinisi kumasevisi wakho
Ncishisa ukuphazamiseka kwenkonzo
Thola inani lemali kumnikezeli wakho wesevisi
Qinisekisa ukuthi amakhasimende akho angasebenzisa amasevisi lapho futhi lapho kudingeka khona
Ukusekela Ukuthengisa & Ukusetshenziswa kwamasevisi wakho
Ku-1980, I-Library Technology Infrastructure Library (ITIL) lakhiwa yiComputer ne-Telecommunications Agency (CCTA), kwakuyisikhathi lapho i-UK ibhekana nezinselelo eMnyangweni we-IT. Esiqulweni sokuqala kwakukhona izincwadi eziningi ezivimbela imikhuba ethile ngaphakathi kwe-ITSM.
Inguqulo ye-ITIL i-1 iphendukela ngaphezu kwezingu-30 ku-1986-1996, leso yisikhathi lapho le nguqulo isetshenziselwa izinkampani eziningi ze-IT. Ngenxa yobuthakathaka bemvelo, le nguqulo ithuthukiswe ku-version elandelayo okungukuthi I-ITIL Inguqulo ye-2, ku-2001. Le nguqulo ifinyeleleke kakhulu futhi igxile uma kuqhathaniswa neyaphambilini. Le nguqulo entsha ye-ITIL manje iyinhlanganisela ye-9 Management Sets. Phakathi kwabo iziKhathi Zokuphathwa Kwezinsizakalo ze-2 zisetshenziselwa kakhulu kwi-IT Sector. Inguqulo ye-ITIL i-2 Glossary yeza ukufanekisa ku-2006.
I-Central Central Yezobuchwepheshe Nezokuxhumana Ihlanganisiwe neHhovisi likaHulumeni Commerce (OGC) ngonyaka ofanayo lapho i-ITIL Version 2 iqalisiwe. Ku-2007, le nhlangano iqalise inguqulo elandelayo ye-ITIL ebizwa nge-ITIL Version 3 (V3) noma i-ITIL 2007 Edition noma i-ITIL Refresh Project.
Manje i-V3 incishiswe kusuka ku-9 Volumes kuya ku-5 Imiqulu futhi icacisa umqondo we-Service Lifestyle. Lawa abizwa ngokuthi: -
Isu Lenkonzo (SS)
Isevisi Yesevisi (i-SD)
Ukuguqulwa Kwesevisi (ST)
Imisebenzi Yesevisi (SO)
Ukuthuthukiswa Komsebenzi Okuqhubekayo (CSI)
Khona-ke ku-2009, yonke inguqulo yangaphambilini isusiwe ngemuva kwe-oda ngu-Government Commerce. Inguqulo ebuyekeziwe ye-2007 Edition yashicilelwe ku-2011. Le yiyindlela yokugcina ebuyekeziwe.
Iyiphi iKhasimende Yebhizinisi Elikushoyo?
Shweta Sharma, Isevisi Yesevisi Ephakathi ye-ITIL
I-Tarun, ITIL- Design Intermediate Service
Isikhungo saso esikhulu nabasebenzi bekhwalithi kanye nayo yonke i-Infra edingekayo. Isula isisekelo se-ITIL emzamweni wokuqala ngamamaki amahle. Ncoma konke ukuthi ujoyine lokhu ngesitifiketi sabo.
I-Anubhav, I-ITIL v3 Foundation
Ojasv Jain, Isevisi Yesevisi Ephakathi ye-ITIL
Kwaba ukuqeqeshwa okumangalisayo nomqeqeshi onjalo omuhle kanye nemvelo yokufunda. Kwakungcono ukwazi ukuthi izinhlangano zisebenza kanjani ngaphakathi kanye nezinqubo ezihlobene. Ngaphezu kwalokho uMqeqeshi wayenolwazi kangangokuthi wachaza yonke into ngesineke futhi ngezibonelo ezisebenzayo okwangenza ngiqonde ngayinye nayo yonke into kalula. Angikaze ngilindele ukuthi kube isipiliyoni esihle kangaka kodwa ngihlela ukwenza ezinye izitifiketi zami kusukela lapha kuphela. I-Cheers kanye nakho konke okuhle kunabo bonke abantu.
Mukund Srivastava, I-ITIL v3 Foundation
Kamal Kant Sharma, Isevisi Yesevisi Ephakathi ye-ITIL
Abasebenzi abasekelayo be-Gr8. Umqeqeshi unolwazi oluhle ku-ITSM. Ikhwalithi yokudla engcono kakhulu. lonke ulwazi oluhle kakhulu phakathi nokuqeqeshwa
Rakesh Ass, I-ITIL Ukuphatha Kuyo yonke i-Lifecycle
UThenni Thomas, I-ITIL v3 Foundation
Posted on04 uJan 2018
I-ITIL: Umehluko phakathi kokuphathwa kwezehlakalo nokuphathwa kwezinkinga
Posted onI-26 Dec 2017
Posted onI-04 Dec 2017
I-ITIL Vs ye-PMP Certification? Kukuphi okulungile kuwe?
Iyini i-ITIL? Yiziphi Izinzuzo ze-ITIL Certification?
Indlela yokuthola i-ITIL Foundation Certification
Yikuphi okungcono Six sigma noma Itil? Uyini umehluko?
Yiziphi izivivinyo ze-ITIL® ezingathathwa futhi yiziphi izidingo zokungena?
Uhlelo lwe-ITIL® lwesitifiketi luhlinzeka uchungechunge lwezitifiketi ezigxila ezicini ezihlukahlukene ze-ITIL Framework.
ITIL isisekelo - Azikho izinto ezidingekayo njengalokhu nanoma ubani ofuna ukuphishekela umsebenzi kulo mkhakha ungakwazi ukuthola isitifiketi (Foundation) isitifiketi.I-certification ye-ITIL isitifiketi sezinga lokungena ku-ITIL Journey
I-ITIL ephakathi - Ukuze uhambe noma yisiphi isitifiketi esiphezulu se-ITIL (i-Lifecycle noma i-Capability Module) udinga ukuthi ube nokwazisa okuyisisekelo.
Uchwepheshe we-ITIL Uhambo - Ukuze ube uchwepheshe we-ITIL, udinga ukuhamba ngeMimodeli ehlukene ye-ITIL Training futhi kufanele usule ama-Exams Certifications ahambisana nayo, ngokwenza kanjalo uzothola amaCredits athile. Ukuze ufinyelele ukubaluleka kochwepheshe be-ITIL udinga inani lama-Credits we-23.
Yiziphi izindlela zokulethwa kwezifundo zokuqeqesha ezigunyaziwe ze-ITIL?
E-Innovative Technology Solutions sinikeza ITIL Training ku-3 izindlela ezahlukene zokuqeqesha -
1.Ukuqeqesha ekilasini eNdiya (Kufaka phakathi - Ukuqeqesha + Indawo yokuhlala + Yokudla + Isikhumulo sezindiza Phakamisa & Khipha + Ukuthutha Kwansuku zonke + Okunye Okuhlinzekwayo).
2.Umqeqeshi we-inthanethi ulahlekile Ukuqeqeshwa ongayithola ekuthuthukisweni kwehhovisi lakho noma ekhaya.
3.Imodi Yokuqeqeshwa Kwangasese - Lapho sithumela khona umqeqeshi wakho endaweni yakho ukuletha ukuqeqeshwa okuyisisekelo sakho, uma unabahlanganyeli abaningi (ngaphezu kwe-5 pax) yokuqeqesha.
Ubani abaqeqeshi eklasini & ukuqeqeshwa kwe-inthanethi (OILT)?
I-innovative Technology Solutions (i-ITS) i-Authorized Training Partner ye-Axelos futhi inikezela kahle kakhulu embonini yezinhlelo zokuqeqeshwa ezisemthethweni ezinikezwe abaqeqeshi abanolwazi olujulile kwi-IT Training Industry.
Imiphi Imisebenzi engingayithola emva kokuba i-ITIL iqinisekisiwe?
Uma ungena-level noma uneminyaka embalwa ye-IT isipiliyoni, ungalindela ukuqashwa njengomxhumanisi wenqubo. Umxhumanisi wenqubo uqinisekisa ukuthi imisebenzi yokuphatha enkambweni yenziwa njengoklanyelwe. Umxhumanisi wezehlakalo, ushintsho womxhumanisi kanye nomhlaziyi wokuhlela kukhona ezinye zezinhlelo zokuxhumanisa ezitholakala ku-ITIL®-based IT service management.
Esikhathini esiphakathi kokuphatha, okungenani ubuneminyaka eyisishiyagalombili yobufakazi, ungase ucelwe ukuthi uphathe izinqubo ekupheleni. Uzoba nabaxhumanisi ababika kuwe, futhi uzoba nesibopho sokuqinisekisa ukuthi imisebenzi ekulawulweni kwezinsizakalo iyavumelana nezinqubo. Umphathi wezinkinga, imenenja yokukhulula kanye nomphathi wedesksi yesevisi yilezi ezinye zezindima zokuphatha.
Uma ufuna ukungena kwi-ITIL® indima yokubonisana, udinga ukuhanjiswa ngendlela ehlukile. Kufanele ube umuntu oqaphela ngokuzenzakalelayo ukungahambisani nezinqubo futhi ucabange ngokusebenza kahle. Ake sithathe isimo esingezona se-IT njengesibonelo. Esitolo sokudlela, u-hostess uhlala nawe. Umlondolozi uthatha umyalelo. Umgijimi wezokudla uhambisa ukudla, futhi i-busser ivula ithebula. Ayikho yalezi zindima ezingenziwa ngaphandle. Uma uvakashela indawo yokudlela, ubona le nqubo? Uyabona izinguquko futhi ucabange ngalokho okusebenzayo, yini? Uma ubona futhi ucabanga ngale ndlela, ungase usebenzise kahle kakhulu inqubo yombonisi / inqubo yenjiniyela yonjiniyela. Ababonisi bezinqubo ngokuvamile banokuningi kweminyaka engu-10 yokuhlangenwe nakho nokuthanda ukumba izandla zabo ngokujulile kuyo yonke imisebenzi, ngaphakathi kwe-ITIL® nangaphandle. Umsebenzi ohloniphekile kakhulu embonini, kodwa kufanele uthande izinqubo zokubhala kanye nokudala amashadi okugeleza.
Okokugcina kodwa hhayi okungenani; ungaba ngumqeqeshi we-ITIL®. Njengoba i-ITIL® idinga kakhulu abaqashi, abafuna umsebenzi abaningi baya indlela ye-ITIL®. Uma ufuna ukuba ngumqeqeshi, funda yonke inqubo ye-ITIL® ngokuningiliziwe. Umqeqeshi we-ITIL® uzodinga ukufaka isigqoko se-academic ukuze aqeqeshe abafundi kahle kwezobuciko be-ITIL®.
Imali yethu yokuqeqesha ihlanganisa ini?
Imali yokuqeqesha ekilasini ihlanganisa -
• Ukuqeqesha okusemthethweni ngeMpahla eQeqeshayo
• Izimali zokuhlola iziqinisekiso
• Ukuhlala nokudla (ku-Hotel ye-3 Star)
• I-Airport Pick Up & Drop
• Isikhungo Sokuthutha Nsuku Zonke
• Isikhungo samahhala se-Wi-Fi esikhungweni sokuqeqesha & Ihhotela
• I-100% Yokudlulisa Isiqiniseko
Imali yokuqeqesha e-inthanethi ihlanganisa -
Ngibhala kanjani ukuhlolwa kwami?
Ngayo Imali yakho yokuqeqesha ihlanganisa d yokuhlolwa isitifiketi yokuhlolwa, ngakho ukuhlolwa kuyobe ibhaliswe ngqo yi-ITS
Ingabe izitifiketi zami ze-ITIL zizophelelwa yisikhathi?
Izitifiketi ze-ITIL azipheli. Noma kunjalo, kunezinguqulo ezahlukene ze-ITIL v3 2011 njengenguqulo yakamuva. Uma usuqalisiwe uhlelo olusha lwenkambo, kuzodingeka uqinisekiswe futhi.
Ngiyiphi isitifiketi engiyothola emva kokuqeda ukuqeqeshwa?
Ngemuva kokuphothulwa ngokuphumelelayo kokuqeqeshwa nokuhlanza ukuhlolwa, uzobe unikezwe Isiqinisekiso Esisemthethweni esivela ku-Axelos.
Kwenzekani uma ngihluleka ukuhlolwa?
E-Innovative Technology Solutions, Sinika ukuqinisekiswa kwe-100% ukudlula uma ngabe abanye abangu-1 behluleka ukuhlolwa noma behluleka ukuhlolwa kwe-2 ecacile, sinikeza nge-2nd shot (Reattempt) mahhala.
Eduze neSignature Tower
Isitezi sokuqala, i-H-159,
Vimba H, Umkhakha 63,
I-207, i-2nd Floor, i-Lok Centre, i-Marol Maroshi Road, i-Andheri East, i-Gamdevi i-Mumbai-400059, i-Maharashtra
DN- 14, iVishnu Tower,
I-XNUMth Floor, Umkhakha -V,
Idolobha laseSalt Lake
I-Innovative Technology Solutions eholela ekufundiseni phambili kwe-IT kanye nokuqeqeshwa kwamakhono ochwepheshe kanye nenkampani yokuhlinzeka ngekhambi. IHLABANYE nezinkampanini zokuthuthukiswa kweSofthiwe neyeKhilimpi zinikeza ukuqeqeshwa kanye nezixazululo kumabhizinisi amaningi amakhulu nezincane kulo lonke i-Globe. I-IT isithengisi esithandwayo se-MNC njenge-HP, EMC nokunye okuningi ngokuhlinzeka ngamakamelo okuqeqesha nokuhlela ingqalasizinda yezidingo zokuqeqesha esifundeni se-APAC / APJ. IZI ziyaziwa ngokusebenzisa i-Innovation ekuqeqesheni ukulethwa futhi zivuselelwe njalo ngokuqukethwe okufanele ukulethwa ngabafundisi abahle kakhulu. ITSI iyaziwa ukuthi iyashintshashintsha kakhulu ngokwezifiso kokuqukethwe kokuqeqeshwa futhi ilungele ukuletha ukuqeqeshwa kunoma iyiphi indawo.
Umlayezo wakho *